मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा : RajdhaniDaily.com -
Home अर्थ मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा
काठमाडौं । दुई वर्ष अगाडि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीले प्रत्याभूत गरेको नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
काठमाडौँ । कोरोना रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाको समयमा पनि नेपालको सडक पूर्वाधारमा पहिलो सुरुङमार्ग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । निर्माणस्थलमा ‘क्लोज क्याम्प’...
Breaking News Sushila Bishwokarma - January 19, 2021 0
बुलेट बाईक सहित बेपत्ता पंकज मृत भेटिए
स्याङ्जा । बुलेट बाईक सहित एक महिनादेखि बेपत्ता स्याङ्जाका पंकज गिरी मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिका वडा नं. २ भालुपहाडस्थित भिरमा...
सवारी दुर्घटनामा एक दम्पतिकाे मृत्यु
बर्दिया । बर्दियामा ट्रयाक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक दम्पतीकाे ज्यान गएको छ । नेपालगञ्ज गुलरीया सडक खण्ड अन्तगर्त पर्ने बढैयाताल- ७, पचासामा शनिबार राति सडक...